फेरी हराईन २१ बर्षीय युवती, ११ दिन देखि बेपत्ता छिन कल्पना , खोजिदिन परिवारको आग्रह – Sapana Sanjal
July 18, 2021 71
Sapana Sanjal : नुवाकोटको दुप्चेश्वर गाउँपालिका वडा न. ५ बालकुमारी घर भएकि २१ बर्षीय कल्पना बि.क. बिगत १० दिन देखि बेपत्ता भएकि छिन । काठमाडौँको बुढानिलकण्ठ नगरपालिका वडा न.२ मा बिगत २ बर्षदेखि बस्दै आएकि उनी असार २३ गतेबाट हराइरहेको हुँदा खोजीको लागि परिवारले सबैमा आग्रह गरेको छ । उनका श्रीमान रामकुमार बि.क.का अनुसार उनी असार २३ गते करिव २ बजे घरबाट बजार जान भनेर बाहिर निस्केको र त्यसपछि उनी सम्पर्कबिहिन भएको बताएका छन् ।
Prevदेउवा प्रधानमन्त्री भएभने कान का,टी दिन्छु भन्ने दिपेन्द्र कडेलले क्यामराकै अगाडी कान का,टेपछी (भिडियो सहित)
Nextआउनुहोस हेरौ तपाईको यो साता कस्तो छ ? हेर्नुहोस साउन ३ गते देखी ९ गतेसम्मको साप्ताहिक राशिफल